ऐतिहासिक पुस्तक शाँदार पिदार र्सार्वजानिक साथमा दालमान पुरस्कार वितरण – Sunuwar.org
ऐतिहासिक पुस्तक शाँदार पिदार र्सार्वजानिक साथमा दालमान पुरस्कार वितरण
माघ ७, यालाखोमा । ‘घर त हामी डाँडाभरि सेतै बनाउँछौ । बाटो पनि बनाउँछौ गाडी हिड्ने । स्कूलहरु पनि बनाउँला । पुल पनि बनाउँला लुरुलुरु सहजै नै नलडीकन, नखसीकन हिड्न सक्ने । तर हिड्ने मान्छेको मन चोखो भएन भने । चोखो पार्न सकिएन भने । स्वस्थ बनाउन सकिएन भने हाम्रो समाज अगाडि जाँदैन । मन र मस्तिष्कलाई चोखो, स्वस्थ र सबैको लागि राम्रो हुना, बनाउनको लागि उनीहरुको मानसिकतामा फेरबदल ल्याउनका लागि साहित्य र साँस्कृतिक रुपान्तरण अत्यान्त महत्वपर्ूण्ा कुरा हो ।’ कोइँचको महान चाड शाँदार पिदार : एक अदेखा मुक्दुमी सत्य विमोचन गर्दै प्रमुख अतिथि नेपाल प्राज्ञ प्रतिष्ठानका कुलापति प्राज्ञ वैरागी काइँलाले अगाडि थप्नु भयो, ‘आज अर्को एउटा पुस्तक विमोचन गर्ने अवसर दिनु भयो । कोइँचको महान चाड शाँदार पिदार । यो अत्यन्तै महत्वपर्ूण्ा पुस्तक देखा पर्‍यो । वास्तवमा हामीले आफ्नो जातित्वमा भएका रितिथिति संस्कार मिथकहरु, र अनुष्ठानका विषयका यस्ता कुराहरु लिपिवद्ध गर्ने, अभिलेख राख्ने काम गर्न सक्यौं भने अत्यन्तै ठूलो काम हुन्थ्यो । हाम्रोमा विदेशीहरुले त उहिल्यैदेखि गरे । मलाई लाग्छ खोज्दै गयो भने सुनुवारको वारेमा पनि वि.एच.हड्सनले उहिल्यै नै १८४६ अगाडि नै विभिन्न जातिको अभिलेख बटुलेकोमा सुनुवारको पनि हुनसक्छ । लिम्बुको त धेरै अघात सामग्रीहरु बटुलेका छन् । नेवारको बौद्ध ग्रन्थ सम्बन्धी संकलन प्रशस्ता छन् । लिम्बुले मुन्धुम भन्ने तपाइँहरु मुक्दुम भन्नु हुँदोरहेछ । भनेका सुनेका आफ्नो कथालाई यसरी संकलन गर्नु ठूलो कुरा हो । यो आफ्नै कहानी हो । आफ्नै पुखाको कथा हो । आफ्नै समाज विकासको कथा हो यो । हामीले पुजेका देउताहरु हाम्रै पित्री हुन । त्यसैले हामीहरु आफुलाई पितृपूजक भन्छौ । हाम्रै पितापर्ूखाहरु तीस-चालीस पुस्ता अगाडिका आज देउतातुल्य भएका छन् र आज पुजा गरेका छौं । शिर उठाउँदा होस् वा अन्य काम गर्दा होस् । हामीले मानी पूजी आएका देवता हाम्रै पूखाहरु हुन् । जसले देवत्व प्राप्त गरेर आफ्नो जाति, समाज र भविश्यको लागि ठूलै बहादुर, ठूलै काम, ठूलै उदाहरण छाडेर गएका थिए । मलाई लाग्छ हामीहरुको सबै कथाहरु उस्तै हुन् । सबै कथामा हाम्रो जातिहरु कुन ठाउँमा थिए । कुहाँ झोरफँाड गरेर बस्यो ? सन्तान बढेपछि कति भाई भयौं ? हामी चारपट्ट छुटियौं – बसाइँ र्सर्ने प्रक्रिया शुरु भयो । मानवशास्त्रीहरु यसालई ग्रान्ड माइग्रेशन न्यारेटिभ माइग्रेशन भन्छन् । अत्यन्तै सान्सार भरि यसरी छरष्ट भएको छ । एक ठाउँ जनसंख्याको अत्याधिकता बढेपछि अट्दैन । खानु पुग्दैन । तरुलले पुग्दैन । गिठाभ्याँकुरले पुग्दैन । चराचुरुङ्गी पनि कम हुन्छ । उनीहरुले पनि खानुपर्‍यो । ती जस्तै छरष्ट भएर जाने क्रमले अनि एउटाको वंशजले विभिन्न कुलमा परिवारमा विभाजित भएर जान्छ । डाँडाकाँडा खोलानाला तर्दै जान्छ । नाग्दै जान्छ । अर्को ठाउँमा सेटल हुँदै जान्छ । त्यस्तै कथाहरु आउने हो । त्यसै गर्नेहरुलाई हामी एकादिन हाम्रो अगुवा हुनालाई स्वीकार गर्‍यौं । कसैले फेदाङ्वा भन्ला । कसैले नाअसो भन्ला । कसैले यावा भन्ला । कसैले नाक्सोङ भन्ला । कसैले साम्बा भन्ला । भन्दै जाने हो । उनीहरुले देखाएको बाटो हामी पच्छाएर कसरी आफ्नो कल्याण हुने ? कसरी आाफुलाई पितृत्मा आइपर्ने भूत-प्रेत, सिहेँ-सिण्डी जीवितै राख्दै जाने हो । यो कथासँग आफ्नो-आफ्नो जातिको कुलको वंशको, त्यस मध्येमा पनि आफ्नो परिवारको कथा गाँसिने हुनाले यिनको संकलन सामाजिक हिसावले, साँस्कृतिक हिसावले, मानवशास्त्रीय हिसावले, नृतत्वशास्त्रीय हिसावले, साहित्यिक हिसावले, दर्शनशास्त्रीय हिसाबले अत्यन्तै महत्वको हुन्छ । अतीतको कामलाई यर्सअर्थमा महत्वपर्ूण्ा मान्नु पर्छ र यसलाई पुस्तकाकार रुप दिने चुप्लु समाजलाई ।’
उक्त समय दालमान अक्षयकोषले चुप्लु समाजद्वारा प्रकाशित कविद्वय थारिथिमलो क्याब -दिलकुमार सुनुवार) र क्याब नाइलु -प्रेमकुमार सुनुवार) लाई रु आठ हजार नगदसहित दालमान पुरस्कार-२०६३ प्रदान गरेको थियो । साथै विगत एक दशक आधा समयदेखि कोइँच भाषा, संस्कृति संरक्षणमा योगदान पुराएका कोशाकार लोकप्रिय सुनुवारलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । लगभग छ वर्षअगाडि स्थापित अक्षयकोषले अहिलेसम्ममा निरन्तर पाँच वटा पुरस्कार वितरण गरी सकेको छ ।
« किराँती-कोँइच मुक्दुममा संकथन र दर्शन
कोइँच (सुनुवार) पुरख्यौली थलोको नाक्साङ्कन कार्य »
2 Comments to ऐतिहासिक पुस्तक शाँदार पिदार र्सार्वजानिक साथमा दालमान पुरस्कार वितरण
अतित दाइकेा कृति “कोइचको महान चाड शाँदार पिदार एक अदेखा मुक्दुमि सत्य”केा लागि बधाइ, यस वर्षकेा दालमान पुरसकार हामी दाजु भाइ थरि कयाबा र नाइलु कयाबालाइ प्रदान गरेकेमा दालमान अक्षयकेाषलाइ धेरै धरै धन्बादसाथसाथै निर्णायक मन्डलका अतित मुखिया, केाँइचबु काःतिच र रण विर सुनुवारलाइ हाम्रेा कृति( अँस इगिसया ) केा उच्च मुल्याङकन गरि दालमान पुरसकारकेा लागि येाग्य ठहरि दिएकेामा सबैलाइ हृदय देखिनै धन्यबाद …
हार्दिक बधाई-हार्दिक बधाई-हार्दिक बधाई-हार्दिक बधाई
अतित दाइकेा कृति “कोइचको महान चाड शाँदार पिदार एक अदेखा मुक्दुमि सत्य”केा लागि बधाई र यस वर्षकेा दालमान पुरसकार एकै दाजु भाइ थरि कयाबा र नाइलु कयाबालाइ प्रदान गरेकेमा दालमान अक्षयकेाषलाइ धेरै धरै धन्बाद/ हो एसोरिनै जाने हो उभो उभो ताम्बे डाँडाको टुप्पो तिर ..